Iziguli eziningi ukhathazeke lapho edilini lomshado emva, udokotela wathi la mazwi: "isilinganiso atherogenic . ngokwanda ' Ngathi: "Kuyini?" - umbuto bese uyavuka. Le nkomba kusiza ngesikhathi ukunquma amathuba asathuthuka atherosclerosis. Uma kuvela ukuthi Inkomba evamile, isiguli kungenzeka kudingeke ukuba bakhathazeke nesenzakalo yalesi sifo.
Okuchaza okhushuliwe isici atherogenic egazini
Ethakazeliswe ekutadisheni umbuzo, kubalulekile ukuqonda umqondo. Umuntu ngamunye kuyinto efiselekayo ninolwazi oluyisisekelo kanye nesikhathi ukuthatha inhlolovo. Ikakhulukazi isimiso ukuphenya isimo lapho isici atherogenic anda. Kuyini futhi yini esongela? Le nkomba libonisa inombolo "okuhle" (HDL) kanye "embi" (LDL) cholesterol. Lapho LDL aqoqana odongeni semithambo, zingcwecwe eziyingozi akhiwa, okungaholela ukuvaleka imithambo yegazi. Ngemva kwalokho, le kuholela ezinkingeni ezingathi sína ngenhliziyo isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Ekuqaleni, cholesterol itholwe amatshe kwakhiwa esinyeni nenyongo. Kodwa eqinisweni yalolu ketshezi itholakala kuyo yonke izicubu zomzimba womuntu. Kusemqoka ikhono lethu ukuphila nekugubha izinqubo eziningi: kusiza ukwakha cell ulwelwesi, ikhuthaza ukukhiqizwa kwe Bile futhi umzimba okunomsoco, izicubu ahlanganiswe Antioxidants, kusiza ubuchopho futhi ethukile uhlelo, isekela izivikeli mzimba. Uma cholesterol Inkomba atherogenic yanda, kunesidingo sokuba ngithathe izinyathelo, iphuzu esizoxoxa ngalo kamuva. 80% cholesterol ekhiqizwa umzimba, nezinye 20 esiluthola ukudla. Isibindi unesibopho ukulawulwa cholesterol egazini.
Yini okudingeka ukuba bahlolelwe
Isikhathi esining impela iziguli Inkomba atherogenic anda. Kuyini lokhu? Lokhu kuyingxenye ebalulekile yocwaningo olunzulu, okuyinto lembula eziningi izinkinga:
izifo kwesibindi kanye ipheshana emathunjini.
Dynamics izinguquko cholesterol ngesikhathi sokwelashwa kanjalo.
luhlolo zokuvimbela ukuze kutholwe esifike inkinga futhi uya khona ukwelashwa uma kunesidingo.
Izinga umuntu enempilo
Kwezokwelapha inhlolovo ngamunye has izinkomba. Isici atherogenic kumele ilingane nesibalo amayunithi emibili kuya kwemithathu. Kufanele kuqashelwe ukuthi ngeminyaka, kuyenzeka ukuthi Inkomba atherogenic anda. Izimbangela, ukwelashwa kufanele ibuzwe ehhovisi udokotela. Kodwa ngisho nasenkathini Inkomba ubudala akufanele idlule amayunithi 3.5. Ngokuthakazelisayo, izinsana Coefficient elilingana 1. Kukhona wodwana abantu abavukwa ngesilinganiso esincishisiwe. Lokhu kubonisa ukuthi umuntu ngeke usathola izinkinga inhliziyo ngenxa amazinga cholesterol aphakeme.
Umthelela ukudla oku-cholesterol
Gada impilo yabo kusukela zisencane kuyadingeka. Kodwa fancy ukudla okusheshayo, ngendlela onamandla zokuphila futhi imodi amandla ezingeke zisongele nemiphumela engathi sína ekuphileni. ukusetshenziswa engalawuliwe ukudla okumnandi nge amafutha ezilwane kungathinta ngemuva jikelele siqu enhlalakahleni, uma isikhathi akuthathi hlola amazinga cholesterol kanye kwathatha umsoco ofanele.
Isidingo survey njalo
Naphezu indima ebalulekile emzimbeni, cholesterol okweqile kuyinto eyingozi empilweni. Ukuze uthole isithombe sakho, udinga ukuba unikele ngegazi kusukela umthambo esiswini esingenalutho. Isiguli ngasinye ofinyelele engu-20, kutuswa ukuba bahlolwe ukunquma amazinga cholesterol Imininingwane.
Uma amazinga kuvunyelwe kuthiwa lidlule, indaba ingase imali kwi izindonga imithambo yegazi, ukudala zingcwecwe ukuthi ukhawule enomopho. Lokhu isici kungabangela ukufa kohlangothi, yinhliziyo. ukubonakaliswa kwangaphandle of isifo sokuqina kwemithambo yegazi eshiwo ku fat umzimba endaweni we zamehlo, nezihlanganiso. Nge amagugu isilinganiso Inkomba atherogenic izinkomba zangaphandle zingase zingaveli.
Abantu abaningi abaqapheli kunenkinga baze badlule ukuhlaziywa. Ngokuvamile, ezingeni lelisetulu cholesterol egazini akuyona liphinyiselwe ukubonakaliswa kwangaphandle. Ngokukhethekile kufanele ikhokhwe empilweni yabo. izimpawu imbangela: ubuhlungu emilenzeni uhlupho uma uhamba okusheshayo, ukubukeka izindawo yellow on isikhumba namafutha ezingezona ezemvelo, ubuhlungu enhliziyweni. Ngakho, imiphumela ukuhlaziywa wabonisa ukuthi isilinganiso atherogenic anda. Yini-ke ingeyomzimba? Yisifo ukuthi kufanele baphathwe. On the iqembu labo abasengcupheni kakhulu lesi sifo, funda ku.
Inani labantu njalo ukumelana ezahlukene isifo ngenxa umehluko yokuphila kanye nokudla imithetho. Kunezici ezokwenza ngokuzenzakalelayo ukwenza umuntu uhlu yingozi. Uma Inkomba atherogenic yanda, indlela yokunciphisa ke? Enough ukushintsha indlela yakho yokuphila bese uzama ukuphuma ingozi, okuyinto libhekene:
Ukungondleki (inani elikhulu imikhiqizo nge okuqukethwe namanoni ezilwane ekudleni).
Izejwayezi ezimbi (utshwala nogwayi).
Phezu ukuthola amanani, ephakeme kunokuvamile, ningatatazeli. Ukuze ugweme izinkinga zezempilo, kufanele sithathe izinyathelo esiphuthumayo cholesterol ephansi futhi uyigcine evamile.
Indlela ukwehlisa amazinga cholesterol kokujwayelekile
Inkomba anda labo abenza izono ukudla inqwaba imikhiqizo yezilwane (amasosishi ubisi fat, imajarini, ibhotela, yengulube). Endaweni yokuqala kunconywa ukuba aphinde acabange ekudleni kwakho. Ukudla nge kakhudlwana isici atherogenic lihambisana ashintshe ukuphila kuhlanganisa le mithetho elandelayo:
Hola yokuphila asebenzayo.
Control Ukudla, ukudla nge kwezithibelo ezinzima imikhiqizo equkethe ezilwane (nokunamanoni, ubhekeni, namasoseji, amaqanda, ukhilimu, isinkwa, ehla, ushizi nokunye okunjalo).
Ukuthand 'umyeni ephansi fat imikhiqizo yobisi noshizi.
Gada isimo umfutho wegazi namazinga kashukela egazini.
Yeka ukubhema futhi ukuphuza utshwala ngokweqile.
Ukudla ukudla okuningi plant-based, inhlanzi oily, fibre, uju.
Njalo bathathe namafutha kafishi injalo okumsulwa.
Kholwa wena sizimisele umuntu enempilo.
Angaphansi kwemithetho eziyisisekelo kwemikhuba yokudla kungenziwa ngokuphumelelayo ukugcina cholesterol yakho ngaphansi kolawulo.
Iziqondiso langaphakathi: idokhumenti isampula
Dream umzingeli hhayi kuphela